CALI GEEDI oo xoqonaya kaarkii Cabdullaahi Yuusuf Iyo cumar cabdirashiid… – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
by Mohamed Abdirashid Abaajo 3rd February 2019 062
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geedi ayaa maalmahan ku sugan maamul gobolleedka Puntland.
Geedi waxa uu halkaas u tagay ka qeybgalka xafladdii caleema saarka ee Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni. Hase ahaatee, waxa uu xafladda kaddib bilaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aan laga fileyn.
Cali Maxamed Geedi waxa uu 10,000 (Tobon kun oo Dollar) ugu deeqay dayactirka wadada isku xirta Garoowe iyo Galkaacyo.
Geedi waxa uu booqday qabrigii AUN saaxiibkiis madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullahi Yusuf oo uu u duceeyey.
Prof. Cali Maxamed Geedi sidoo kale waxa uu dhaqanka iyo bulshada reer Burtinle kula hadlay isla degmadaas isaga oo sheegay in uu abaalka ugu weyn ee siyaasadda u hayo Cabdullahi Yusuf.
“Cabdullahi Yusuf waa ninka igu soo gardaadiyey siyaasadda.”
Hadaba maxaa socda?
Hadal jeedintiisii Burtinle, Cali Maxamed Geedi waxaa uu ku xaqiijiyey in uu siyaasadda dalka iyo hoggaaminteeda markale hammi ka leeyahay isaga oo cadeeyey in uu Xisbi siyaasadeed furan doono.
Geedi oo ku faanay in isaga iyo Cabdullahi Yuusuf sabab u yihiin dowladda hadda Soomaaliya u dhisan hana qaadkeeda ayaa sheegay in Xisbigiisa Puntland iyo Soomaaliya oo dhan lagu baahin doono.
Dhinaca kale, Geedi oo u muuqday in uu u duur xulayey siyaasiyiin laga hayo in XAMAR dowladda madaxdeeda MARTI ku tahay ayaa adkeeyey in Soomaaliya oo dhan loo siman yahay.
KAARKA UU XOQONAYO
Geedi waxa uu u muuqdaa mid kalsooni ku qaba, iskuna haleynaya in uu wada hanan karo dhammaan kalsoonida shacabka reer Punland ee uu isu soo taago xilka Madaxtinimo ee dalka.
Waxa uu u muuqda mid ka GARACAYA shacabka reer Puntland meesha ay jecelyihiin iyo xoqoshada kaarkii saaxiibtinimo ee Cabdullahi Yusuf.
Dabcan, reer Puntland Cabdullahi waxa ay u yaqaanaan AABE taas oo ka dhigan in shaqsi walba oo ka ag dhawaa uga duwan yahay raga kale – GEEDI kuma DARI doonaan siyaasiyiinta kale ee xusul duubka wada!!!
XIGASHO BADWEYN NEWS
Daawo: Kismaayo oo Gashay Diyaar garowgii ugu xooganaay iyo Shir muhiim ah oo Maanta halkaas ka furmay
DEG DEG: Masuuliyiin ka socda imaaraadka carabta iyo xubno ka tirsan guddiga gurmadka oo lagu weeraray duleedka muqdisho
Dhagayso:- Madaxweyne Axmed Madoobe ” Waan ku Faraxsanahay Heeshiska Maanta